Home » Lahatsoratra farany farany » Safety » Manitatra ny fandrarany ny votoatin'ny fanoherana vaksiny REHETRA ny YouTube
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • fanabeazana • Entertainment • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny politika nitarina YouTube dia hampiharina amin'ny “vaksinim-pitantanana tantanina ankehitriny izay ankatoavina sy hamafisina fa azo antoka sy mandaitra avy amin'ny manampahefana misahana ny fahasalamana eo an-toerana sy ny World Health Organization.
Nanambara i YouTube fa handràra ny atiny rehetra manohitra ny vaksiny amin'ny alàlan'ny politika vaovao nitarina.
Ny politika vaovao dia hanafoana ny fanambarana diso rehetra momba ny fanefitra matetika amin'ny aretina mahazatra.
Noraràn'ny YouTube ihany koa ireo fantsona rehetra mifandraika amin'ireo mpikatroka anti-vaksiny malaza.
YouTube, sehatra fizarana horonantsary amerikana sy sehatra media sosialy ananan'i Google, dia nanambara fa manova sy manitatra ny politikany momba ny fampahalalana momba ny fitsaboana sy ny fahasalamana izy ity ary handrara ny atiny rehetra fanoherana vaksiny manomboka izao.
Raha nihoatra ny fandraràny ny vaovao tsy marina momba ny vaksinin'ny COVID-19, dia nilaza ilay goavambe media sosialy fa hisy fiantraikany amin'ny fitaovana misy vaovao diso momba ny vaksinim-panoherana hafa ankatoavina ihany koa io politika vaovao io.
YouTubeny politikan'ny fanitarana dia hampiharina amin'ny “vaksinim-pitantanana amin'izao fotoana izao izay ankatoavina ary hamafisina fa azo antoka sy mandaitra amin'ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana eo an-toerana sy ny World Health Organization (OMS)», Hoy ny orinasa tao anaty fanambarana.
Ny politika vaovao ihany koa ny fandraràna sy manala-diso rehetra filazana mikasika ny fiarovana amin'ny aretina ho an'ny aretina mahazatra toy ny kitrotro, hepatita B sy gripa.
Izany dia ahitana toe-javatra izay vloggers izay lahatsoratra votoaty eo amin'ny sehatra efa nilaza fa hanao vaksiny nankatoavin'ny tsy mety miasa, na diso mifandray mitaiza azy ireo ara-pahasalamana vokatry.
YouTube dia nilaza fa ny votoaty izay "milaza diso fa ny vaksinina nankatoavina dia miteraka autism, homamiadana na tsy fiterahana, na ireo zavatra ao anaty vaksiny afaka manara-maso ireo izay mandray azy" dia hesorina.
YouTube koa dia mandrara ireo fantsona mifandraika amin'ireo mpikatroka anti-vaksiny malaza sasany toa an-dry Robert F Kennedy Jr sy Joseph Mercola, hoy ny mpitondra tenin'ny YouTube.
Araka ny YouTube, dia nanaisotra ireo lahatsary mihoatra ny 130,000 nanomboka tamin'ny taon-dasa noho ny fandikana ny COVID-19 vaksiny politika.
Amin'ny talata, YouTube dia nanakana ireo fantsona miteny alemà an'ny vavam-panjakana fampielezankevitry ny fanjakana Rosiana RT noho ny fanitsakitsahana ny torolàlana diso momba ny COVID-19.
Nilaza ny YouTube fa namoaka fampitandremana ho an'ny RT izy talohan'ny nanidiana ny fantsona roa, saingy niteraka ny fandrahonana avy tany Moskoa hanakanana ilay tranonkala ny hetsika.
"Toy ny fanavaozana lehibe hafa rehetra, mila fotoana fohy vao manamafy ny fampiharana ny rafitray," hoy ihany i YouTube tao amin'ny fanambarana nataony.
Tsy i YouTube irery no mpiady goavambe haino aman-jery sosialy miady amin'ny fomba hiatrehana ny fihanaky ny teoria fiokoana COVID-19 sy ny fampahalalana diso momba ny fitsaboana amin'ny ankapobeny.
Facebook tamin'ity volana ity dia nandefa ezaka vaovao hiadiana amin'ny vondrona mahery setra sy tsikombakomba, natomboka tamin'ny alàlan'ny fanesorana ny tambajotra alemanina nanaparitaka vaovao diso COVID-19.
Ny safidy Visa Expat vaovao dia mety hanatsara ny fizahantany GCC
Raran-drà italiana- Ahoana ny fomba fampiasana azy ho an'ny zom-pirenena...
Ny ambaratonga "Avoid Travel" ao Etazonia dia nesorina ho an'i Jamaika izao
Brussels Airlines dia manolotra famantarana marika vaovao
Tranga vaovao voalohany mitondra ny tsimok'aretina COVID-19 Omicron...
Ny Air Tanzania dia nanome baiko Boeing vaovao entana entana sy mpandeha...
Nambara ny mpandresy ny S.Pellegrino Young Chef Academy Award
Mamaly ny Red Code of Climate ankehitriny
Nitifitra tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Atlanta
Honolulu mankany Sydney: Fomba vaovao hanidinana ny Hawaiian Airlines
India hanatevin-daharana an'i Shina amin'ny fandraràna ny tsy miankina rehetra...
Orlando mankany Nassau. Sidina New Frontier Airlines
Nanohitra ny COVID ny Londoner ary nanao fialan-tsasatra any ivelany mihoatra ny…